यहाँ प्राचीन संसारको सबैभन्दा पुरानो शान्ति सम्झौताहरूमध्ये एक हो
by कार्ली चांदी
उर भित्र युद्ध ... र शान्ति
http://www.columbia.edu/cu/arthistory/faculty/Bahrani.html हामीलाई प्रारम्भिक राजवंशको अवधिमा प्राचीन मेसोपोटोस्टियामा फर्काउनुहोस्: विशेष गरी, दक्षिणी भाग, उर्फ ​​Sumer। लगभग 2500 ई.पू., प्रमुख पोलिटिक्स, जसको कारण साना क्षेत्रहरुमा शक्ति को समेकन थियो, शहर-राज्य थिए; तिनीहरूले स्थानीय स्रोत र प्रभावको वर्चस्वको लागि प्रतिस्पर्धा गरे। विशेष गरी दुई, उमामा र लैगाशले विशेष गरी कडा संघर्ष गरे, जसको फलस्वरूप वृद्धहरूको स्टाले, पुरानो हिस्टोरोग्राफिकल स्मारकहरूमध्ये एक।
त्यहाँ Stele को भागहरु को सात बाँकी टुक्राहरु, अब लूवर मा। गारु शहरमा एकपटक के भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाइएको थियो, लागाशको क्षेत्रको प्रभाव को एक भाग, यसलाई एक इनाम, लेगेशको शासक, 2460 ईसा पूर्वको द्वारा बनाइएको थियो। यस पिरोलाले पनीर शहर-राज्य को उमामाको साथमा युद्धको एनाटमको संस्करणलाई चित्रण गर्दछ। भूमिको दुवै क्षेत्रको छेउमा। स्टाइल मा शिलालेख धेरै लामो छ, धेरै भन्दा मतदाता पकाचुङ्गा भन्दा लामो छ, यो संकेत छ कि यो एक नयाँ स्मारक हो। हामी पहिलो सार्वजनिक स्मारकको बारेमा जान्न पहिलो स्मारकहरू मध्ये, यो पनि एक उदाहरण हो कि इतिहासकारहरूको युद्धको पुरातन नियमहरू छन्।
स्टाइल दुई पक्ष छन्: एक ऐतिहासिक र एक पौराणिक। पहिलो विशेषता धेरै विभिन्न रजिस्टरहरू छन्, जसमध्ये अधिकांशले उममा विरुद्ध लागी लागी सैन्य अभियानको चित्रण गर्छन्। एक शास्त्रीय कथा को एक आसानी देखि पढने योग्य त्रिभुज कहानी मा विभाजित छ।
एक रजस्टर इनिटम देखि चित्रण गर्दछ, राजाहरु द्वारा पहने एक फिससी कपडे मा पहने छ (यहाँ, हामी योद्धा राजा को छवि को विकास देख्छ), र पक्सिहरु संग धेरै भयानक सैनिकों संग यात्रा। लैगाशले आफ्ना दुश्मनोंलाई मैदानमा ट्रामलेस गर्छ। दोस्रो रेजिस्टरले सफलता परेड देखाउँदछ, आफ्ना राजाहरूको पछि लागेका सैनिकोंले अर्को दर्ताले जीवनको फौजदारी कार्यवाही गर्दछ, जसमा लागी लाग्ने पुरुषले उनीहरूको दुर्व्यवहार दुश्मनोंलाई गाडिदिए।
ढोकाको उल्टो, हामी पौराणिक कथा पाउँछौं कि ईश्वरीय सेनाले कसरी लागी लागी लागी हस्तक्षेप गरे। यो हिस्टोरोग्राफिक कथा को प्रत्यक्ष विपरीत मा स्टाइल को पिछला पक्ष मा प्रदर्शित छ। इनाटमको अनुसार, उनी आफ्नो शहरको संरक्षक देवता, नर्सिरुका छोरा हुनुहुन्थ्यो। यो नर्सुरुको तर्फबाट इनाटमको दावी छ कि उनी युद्धमा गए। सबै पछि, लैगाश शहर र यसको सीमाहरू आफैले ईश्वरसँग थिए, र यो आफ्नो देशमा पार गर्न सतावट थियो। संस्कारहरूले यसको नाम दिंदै शरीरको वरिपरि झुन्ड्याउँछ।
यस पक्षमा प्रायः चित्रण गरिएको नगर्सु हो , उमम्माको दुश्मन सिपाहीहरू एक विशाल नेटमा, शशिगल जाल। एकै ठाउँमा उसले शुद्ध राख्छ; अर्कोमा एक गति हो, जसको साथ उसले नेटमा नग्न सिपाहीहरू झुक्याउँछ। नेटको माथि न्युयोर्कु को एक प्रतीक, पौराणिक इमुडगुड पक्षी छ। ईगल शरीर र एक शेर टाउको बनाइयो, हाइब्रिड प्राणीले वर्षाको बृद्धिको शक्तिलाई व्यक्त गर्यो। जस्तो कि नर्सुरु, कुनै पनि मानिसको भन्दा ठूलो रूपमा देखाइएको छ, एकल सैनिकले यी सैनिकहरूलाई पराजित गर्दछ, हामी परमेश्वरलाई आफ्नै शक्तिको शक्तिको रूपमा हेर्छौं; राजाले आफ्नो शहरको देवतालाई सेवा गरे (र उनको विवेक पिता), वरपर वरपरको बाटो।
त्यसोभए यो इमेजरी महान छ, तर लागी लागी लागी लागी लागु को लागी वास्तविक संधि को लागी?
दुई शहरहरू बीच सीमामा राखिएको, यस स्मारकले हजुरआमालाई साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण सुमेरियन देवताहरूलाई आधे दर्जनमा समावेश गर्यो, जुन गवाहहरूको रूपमा संधै अनुमोदित भएका थिए। अम्माका पुरुषहरू एन्लिल, अर्को महत्त्वपूर्ण ईश्वरले कसम खाएका थिए कि उनीहरूले सीमा र स्टाइलको आदर गर्थे। उमामाको विनिमयदर लागी लागी लागी लागी लागी लाग्ने लागे, यद्यपि इनुममले उम्मामा क्षेत्रको अर्को भाग भागे। पछि, यद्यपि, यो लेखिएको थियो कि उमामा कहिल्यै भाडा तिर्दैन, त्यसैले शहरहरू फेरि युद्धमा गए। इनाममको उत्तराधिकारी, एमिमेनाले आफ्ना दुश्मनहरूलाई फेरि फेरि धक्का दिए।
नयाँ संधि सिर्जना गर्नुको साथै, इन्नतमले आफूलाई पुरानो स्मारकहरूको पुनरुत्थान देखेका थिए, आफैलाई बिल्डरको राजाको रूपमा आफ्नो पूर्ववर्ती रेशमको रूपमा पुनरुत्थान गर्यो, किनभने तिनले त्यहाँ एक किट्टी पुनर्निर्माण गर्यो कि किशोरी वर्षको राजा मिशेलिमले।
स्रोतले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा जैनब बहादुरको कक्षाहरू समावेश गर्दछ।
के हनिबाल, प्राचीन रोमको कालो, कालो?
यूनानी इतिहासकार हेरोदोटस को थिए?
महान् किताब रिपोर्ट कसरी लेख्नुहुन्छ
रबिन्द्रनाथ टैगोर को रहस्यमयवाद
लैटिन सजिलो छ?
8 सिगारहरू अनलाइनको लागि ठूलो स्थानहरू
प्राथमिक डाटा प्रकारहरू
पोतको चिन के हो?
शास्त्रीय संक्षिप्त विवरण पत्र एम के साथ शुरू
सिवेनी - दक्षिणी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय
दस आज्ञाहरूको छोटो संस्करण
एन रैंण्ड: सोसाइओथ कसले शिरिक हत्याराको प्रशंसा गर्नुभयो?
पाश गर्दा गर्दा - पर्ल ट्यूटोरियल सुरु, नियन्त्रण स्ट्रक्चरहरू
किन्स्टोन प्रजातिहरू: जनावरहरू महत्त्वपूर्ण भूमिकाको साथ
सम्बन्धको माध्यमबाट परमेश्वरको उपासना गर्नुहोस्
टेडी बियरको इतिहास
हामी तपाईंलाई एक डरावना क्रिसमस चाहन्छौं: क्रिसमस डरावनी सिनेमाहरू
मेरो डी बुक
यसको र यो हो
प्लस आकार स्की पहनें
कसरी धीरज र खुसीसाथ एक प्रोम निमन्त्रणा बन्द गर्नुहोस्
'राजा लियर': ऐन3विश्लेषण
सेन्टन हॉल विश्वविद्यालय प्रवेश
बाँचे र बाहिरी
रबर्ट हेनरी लरेंस, जेआर: अमेरिकाको पहिलो कालो खण्ड